APET PETG CPET Sheet Extrusion Mutsetse - China APET PETG CPET Sheet Extrusion Mutsetse Mutengesi, Fekitori -Jwell
APET PETG CPET Sheet Inowedzera Mutsara
Iyi ndeimwe yeaya epamberi ekugadzira mitsara neakakura matekinoroji uye kugadzikana muChina.Chinofananidzwa neimwe yakafanana mhando michina, iri pamusoro pe30% yakakwira mukuita kwese kushanda.Uyu mutsetse wakakodzerawo PS, PP, PE futi.
PETG inonzi yakadzika tembiricha PET, inzvimbo nyowani-inoshamisika kurongedza zvinhu zvine maficha akadai akakwirira kubwinya, kujekesa kwakanaka, chakanakisa chipinganidzo chivakwa, kuzvisungirira, iyo inoshandiswa kunama glue uye nepamusoro-frequency kugadziriswa.
CPET rudzi rweyakagadziridzwa PET.nekudzivirira kwakanaka kune yakanyanya tembiricha, inowanzo shandiswa kurongedza mu microwave oven.
PET Stereoscopic Optical Grating Sheet: Inogona kunge iri yepamusoro giredhi pasuru yezvizoro, mushonga, fodya nedoro uye zvakajairika zvinhu senge zvinyorwa, kushambadzira, maposta uye ese marudzi emakadhi.
JWZ-BMHG500 / 1000 Ridzai richigadzirisa Machine